Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na afọ 2020 | Ngalaba Gọọmenti U.S. maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ.
This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Igbo.
Nke a bụ ụdị nke 2020census.gov dị nkenke, atụgharịrị n’asụsụ ọzọ. Pịa ebe a iji laghachi na saịtị nke zuru ezu dị n’asụsu Bekee na Spanish.
Igbo / Igbo ig
Gọọmenti Ọnụọgụgụ ndị mmadụ akwụsịla inakota azịza maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na afọ 2020. Peeji a na egozi ozi niile n'ozuzu banyere igụ ọnụ, na ihe kpatara rịzọọtụ ya ji di mkpa na ime obodo gafee na mba. Daalu na nzaghachi gị!
Kedu Ihe Bụ Ọnụọgụgụ Ndị Mmadụ Ahu?
Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na afọ 2020 na agụ okenye, nwatakịrị, na nwata niile bi na obodo United Steeti. Ana eme igụ ọnụ a kwa afọ iri site n’aka Ngalaba Gọọmenti U.S. maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ, ụlọ ọrụ gọọmentị.
Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na eweta data dị mkpa nwere ike ịhazi ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke ndụ gị. Ndị ọmeiwu, ndị nwee azụmahịa, ndị nkuzi, yana ọtụtụ ndị ọzọ na eji data a kwa ụbọchị iji weta ọrụ, ngwaahịa, na nkwado na ime obodo gị.
Kwa afọ, a na emefu ijeri dollar na ego gọọmenti etiti nwepụtara na ụlọ ọgwụ, ngalaba ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ ọgbụgba, ụlọ akwụkwọ, okporo ụzọ, na akụrụngwa ndị ọzọ dabere na ozi nke ọnụọgụgụ nke ndị mmadụ.
Nsonaazuụ nke ọnụọgụgụ nke ndị mmadụ ga-ekpebi nọmba nke okwa steeti ọ bụla ga-enwe n’ime Nzukọ ndị Ome iwu nke U.S, a na eji ha kee oke maka ebe ntuli aka.
Akwụkwọ iwu nke ndị obodo United Steeti na achọkwa ọnụọgụgụ ndị mmadụ: Edemede nke 1, Nkeji 2, manyere na obodo United Steeti ga-eme ọnụọgụgụ nke ndị mmadụ otu ugboro kwa afọ 10. Ọnụọgụgụ nke mbụ mere na afọ 1790.
Ihe nzuzo na Nchekwa
Ana eji azịza ndị ị nyere naanị iji mepụta ọnụọgụgụ.
Iwu megidere na Ngalaba Gọọmenti maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ ga-echekwa aziza gị ma debe ha naanị n’ozuzo. N ‘ezie, onye oru niile na anụ iyi iji chekwa ozi onwe gị rue ebighi ebi.
N’okpuru Isiokwu iri na ato nke ndị Koòdù U.S., Ngalaba Gọọmenti maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ agaghị enye ozi o bula aga amata banyere gị, ezinụlọ gị, màọbụ azụmahịa gị, obuladi nye ndị ụlọ oru na amanye iwu. Iwu na agba mbò ihu na echekwara data ọnụọgụgụ onwe gị ma agaghị eji aziza gị emegide gị site na ụlọ oru goomenti màọbụ uloikpe.
Ndị na Ewere Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na Agbataobi gị
N’ime afo na esote, i nwere ike ịhụ ndị na ewere ọnụọgụgụ ndị mmadụ na agbataobi gị.
Nke a bu nke kwesiri ime na Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na afọ 2020. I nwere ike ihu ndị oru ọnụọgụgụ ndị mmadụ na ebe gị maka ihe ole ma ole kpatara ya:
Ha na enyocha adreesị na njikere maka ọnụọgụgụ ndị mmadụ.
Ha na aga n’ulo maka ọnụọgụgụ ndị mmadụ màọbụ nyocha ọzọ nke Ngalaba Gọọmenti maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ.
Ha na enyefe ozi ọnụọgụgụ ndị mmadụ.
Ha na enyocha oru metụtara ọnụọgụgụ ndị mmadụ.
Na ọnwa Maa n’afọ 2020, ndị na ewere ọnụọgụgụ nke mmadụ ga ebido n’aga n’ulo ndị na azaghachibeghi na Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na afọ 2020 iji gbaa mbò hu na agụnyere onye o bula.
Otu I Ga Esi Enye Aka
Inweta ọnụọgụgụ zuru ezu ma zie ezie n’afọ 2020 na achọ nkwado onye o bula, enwere ọtụtụ ụzọ maka ndị mmadu, azumahia, otu ime obodo, na ndị ọzọ iji nye aka.
I nwere ike inyere anyị aka site na ikekorita ozi Ngalaba Gọọmenti maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na ozi ya na ndị enyi gị, ezinụlọ nà ndị na eso gị na Fac
Ka Anyị na Gị Rụkọ Oru
Ọtụtụ nari ụlọ oru, na abụghị maka uru, ndị na eme iwu, na ndị mmadụ na agbasa okwu banyere ọnụọgụgụ ndị mmadụ na afọ 2020 na ihe mere oj
Ngalaba Gọọmenti maka Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na enweta ego agumakwukwo banyere Ọnụọgụgụ ndị mmadụ na afọ 2020 iji nye aka eme ka ndị obodo tinye aka.
Gaa njem nchọpụta ak
Debanye aha maka Ozi intaneèt Ọhụrụ
Tinye adreesị ozi intaneèt gị
Mara ihe na-emenụ